Par Taratra sur 13/08/2019
Nohamafisin’ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny fanajariana ny tany ny tetikasa fanohizana ny fanamboaran-dalana RN12A, avy Vangaindrano mankany Taolagnaro, sy ny RN9 avy eo Analamisampy miakatra mankany Manja, mampifandray ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe. Mpamatsy vola ny Bad, 32 tapitrisa dolara; Vondrona eoropeanina, 46 tapitrisa dolara; fanjakana malagasy, 7,85 tapitrisa dolara. Ampifandraisina amin’ireo lalam-pirenena ireo koa ny lalana avy any amin’ny kaominina ambanivohitra. Akora avy any ambanin’ny tany sy ny vokatry ny fambolena no kendrena hamoraina ny famoahana azy amin’ireo lalana ireo.
Latsaka ambany dia ambany ny vidin’ny kafe, taona maromaro izay any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany. Nanomboka ny taona 1989, nofoanana ny fetra (quota) isam-pirenena eo amin’ny fanondranana kafe, ka nanomboka teo koa izay matanjaka ihany no tompon’ny tsena. Tsy ny mpamokatra mihitsy no tompon-kevitra amin’ny vidiny fa ny mpanangom-bokatra mpanondrana . Antitra ihany koa ny ankamaroan’ny fototra kafe ka tsy mamokatra firy sy ratsy kalitao, izay mahatonga ny vidiny latsaka ambany
Ratsy ny lalana avy eo Toamasina mankany Foulpointe, 77 Km atao ora efatra amin’izao fotoana izao, raha tokony ho vita ora roa. Miezaka manome fahafaham-po ireo mpizahatany anefa ny mpandraharaha any an-toerana, saingy olana goavana io lalana io. Manome karazana tolotra rehetra ilain’ny mpizahatany ny an-toerana : manome toerana, mitarika mpitsangantsangana, manao volo, miantoka fandriampahalemana… Ao koa ireo tolotra hafa, toy ny vahiny afaka mahandro ny sakafony ao amin’izay toerana ipetrahany.